Emezugala Otu Nkọwa okwu na Ụkwụ Orthodidact
Kedu atụmatụ iji nweta nkwalite na 2022?
Anaghịzi emehie mkpụrụedemede na usoro Orthodidact
Edere site Tranquillus | Feb 24, 2018 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Zuru oke okwu gị edere na usoro Orthodidact
Ị ma na ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ji nkà n'ịsụpe okwu kpọrọ ihe nke ukwuu? Ọzụzụ n'asụsụ French dị mkpa iji bulie ohere ịnweta ọrụ. Ekele maka usoro Orthodidactic, ị nwere ohere iji meziwanye nkà ịde ihe site n'ịmụ iwu niile kachasị mkpa iji zere imehie ihe na mgbanwe email gị. Àgwà a na-egosikarị ịdị mkpa nke onye ọrụ, ya mere ọ dị mkpa iji lekọta onyinye gị ma mee ka okwu gị dịkwuo mma.
Mkpa iwu zuru oke nke French edere na ụwa ọrụ
Nkà mmụta zuru oke nke asụsụ French bụ taa ihe dị mkpa na gburugburu ebe ọkachamara. Imelite mkpoputa gị adịghị mgbagwoju anya ka ọ dị. Na mgbakwunye, ọ bụ nnukwu ụzọ iji mee onwe gị mma n'anya ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ofe ụlọ ọrụ niile.
Ọrụ ọ bụla ị tinyere, nka asụsụ gị ga-ekewapụ gị ozugbo na ndị ọzọ na-achọ akwụkwọ. Ọrụ niile na-emetụta nchegbu a maka ikwu okwu, nke na-agba akaebe na ọ dị mkpa nke otu nzukọ. Otu mmejọ mkpoputa otu, na ntụkwasị obi nke ika ahụ dum na-ewe nnukwu ihe! N'iburu eziokwu a n'uche, ọ nwere ike ịmasị gị inweta asambodo gị na French, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ asụsụ obodo gị.
Usoro Orthodidact bụ nkuzi onwe onye
Ma ị bụ onye na-akwado mmega mkpoputa, ma ọ bụ n'ụzọ megidere nke ahụ mara na ị na-eji obi ọjọọ gbuo okwu ọ bụla gbagwojuru anya, nwa akwụkwọ ọ bụla ga-ahụ ọnọdụ ha na Orthodidacte. Onye ọ bụla nwere ike ịmụta n'ọsọ nke ya n'enweghị nchekasị ọ bụla. Ha niile nwere usoro ọmụmụ ahaziri onwe ha. Ya mere ọ dị mma maka ndị ga-achọ inwe onye nchịkwa mkpoputa n'isi ha mgbe niile.
GỤỌ Usoro nkwanye ugwu na njedebe nke email n'otu ọnọdụ
Ihe omumu nke sitere na usoro Orthodidact na-eme ka a na-enye ọzụzụ zuru oke iji mee ka udo dyslexics na okwu ndị French mara mma. A na-ezubere ya maka ndị na-amụ ihe nke na-enweghị ike ikwu okwu na ederede. Orthodidact na-enye ha usoro ihe omume na ọkwa ha, iji mee ka ha nwekwuo ihe ọmụma ka ha na-eme ka okwu ha dị n'otu na otu usoro.
Ghọta ihe isi ike nke asụsụ French
Ị gaghị achọ onye na-enyocha mkpụrụ okwu ọzọ ka ị mara ka esi ejikọta ngwaa nke ọma. Ọdịiche dị iche iche nke kọọdu mmekọ gara aga na ihe jọgburu onwe ya nke asụsụ obodo gị agaghị echekwara gị ihe nzuzo ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ mkpope na ntugharị ụtọ asụsụ, Orthodidacte bụ ngwọta nye nsogbu gị niile. Daalụ maka mgbanwe na mmụta dị anya zuru oke, ị nwere ike melite nka ederede gị n'ụzọ dị mfe.
Ọ dịghị mgbe akaha imegharị usoro iwu kacha mkpa na nka nke ụtọ asụsụ French. Ikpo okwu na-enye nkuzi na isiokwu kachasị elu. Yabụ, ị na-ahụ usoro ọmụmụ ka ị ghara imehie ihe na akara edemede, ma ọ bụ ndị ọzọ iji melite automatisms syntactic. Ihe ga-egbochi gị, n'ọdịniihu, ime nnukwu mmejọ na ugboro ugboro nke ị na-emebu.
Mee ka okwu ya dị n'asụsụ Molière
Ejila aka gị na-amụ asụsụ French ugbu a! Debe onwe gị, ma banye na klas asụsụ zuru oke iji mụta otu esi eji French na nkà na aghụghọ. N'ihi ọtụtụ nkuzi iji meziwanye okwu gị ma meziwanye asụsụ gị, Orthodidact na-eme ka ị nwee nnukwu ọganihu nke ọgaranya nke okwu gị.
GỤỌ Kwupụta ọpụpụ gị na oge ezumike nke nne gị nye onye were gị n'ọrụ
Jikere ikwupụta onwe gị n'ụzọ egwu na nkatọ kwa ụbọchị na ngwa ngwa ngwa! Ihe ọmụmụ ndị a na-enye n'elu ikpo okwu dabara nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite usoro ume ọhụrụ na French. Nkọwa okwu taa bụ ihe akaebe nke ịba ọgaranya. Ịmụ mkpụrụokwu ọhụrụ ga-amụbakwa ihe ọmụma gbasara okwu na nkọwapụta gị. Ya mere, o nwere ike ịbụ na ọ dịghị ihe ga-atụfu, na ihe niile ga-enweta.
Ịmụ ihe n'ịntanetị iji nyere onye ọ bụla aka melite mkpoputa ha.
Ụzọ Orthodidact bụ n'ezie ọzụzụ ntanetị. N'ihi ya, ọ gaghị ewere ihu na ihu. Otú ọ dị, nzube ya bụ iji nyere gị aka mejupụta ọdịiche gị niile. Ebe siri ike n'elu ikpo okwu bụ ọtụtụ ihe dijitalụ na-enye. Enwere ọzụzụ nkuzi vidiyo, mana edekwara ihe ọmụmụ. Iji nyochaa nkà gị, a na-etinye ọtụtụ ajụjụ ndị dị mkpa na mkpebi aka.
Usoro ọmụmụ French ị nwere ike iso na Orthodidacte zuru oke iji nye gị ohere iru ọkwa nke anaghị anabata na mkpoputa na nzikọrịta ozi ederede. Ihe ị ga-agbakwunye ihe mbụ na nka na-adịghị mma iji kwalite CV gị. N'agbanyeghị ọkwa gị, ị ga-ahụ nkuzi na-emegharị na ọkwa gị. Ya mere onye ọ bụla na-ekwe nkwa ịchọta ihe ọ na-achọ, n'agbanyeghị ebe mmalite ya.
Enwere ike ịkwado gị na nkwadebe maka asọmpi Voltaire
Ọ bụrụ na ọrụ gị bụ igosipụta nka gị site na ịnweta asambodo Voltaire, egbula oge ọzọ. Diploma a dị oke ọnụ ahịa na-agba akaebe na ị maara usoro mkpoputa na ụtọ ụtọ asụsụ French anyị bara ụba. Usoro Orthodidact ga-eso gị wee nyere gị aka imezu ebumnuche gị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ibuli ihe ịma aka a. Enwere mmemme zuru oke iji gafere ule a wee jide n'aka na ị ga-agafe aka ya. Nye onwe gị ohere kachasị mma nke ịga nke ọma iji gosi ọkwa dị mma na French wee bụrụ onye na-arụ ọrụ karịa ndị asọmpi gị.
GỤỌ Akwụkwọ edemede: rịọ ịkwụ ụgwọ maka ezumike akwụghị ụgwọ gị
Akwụsịla otu sekọnd, wee jiri ohere ahụ nweta asambodo akụkọ ifo iji gosi na ị maara ụtọ asụsụ na mkpope akwụkwọ gị. A ga-abawanye n'ọrụ gị naanị okpukpu iri. Ị nweghị ihe ọ bụla ị ga-atụfu, yabụ gịnị ma ị nwalee usoro Orthodidact iji hụ ma mmụta dị anya a dị gị mma?
Anaghịzi emehie mkpụrụedemede na usoro Orthodidact January 18th, 2021Tranquillus
gara agaCheap ọmụmụ na niile isiokwu!
-esonụAkuko: 4 Isi ihe di oke mkpa iji mara nke oma
Email template iji meghachi omume na arịrịọ maka onye ozi
Kwupụta ọpụpụ gị na oge ezumike nke nne gị nye onye were gị n'ọrụ
Cheta na ị na-aga nzukọ, ndụmọdụ ga-adị irè
Gịnị na-akọwa egwu e dere?